DEG DEG:- Gaari waxyaabaha qarxa ka buuxo oo goordhaw lagu qabtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Gaari waxyaabaha qarxa ka buuxo oo goordhaw lagu qabtay suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Ciidamada nabad-sugidda qaranka NISA ayaa goordhaw gacanta ku dhigay gaari ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa oo noociisu yahay Zuzuki, iyadoona sida la sheegay gaarigaasi lagu qabtay qeybta lagu iibiyo daawada ee ku taala suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan hay’adda nabad-sugidda qaranka NISA oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gaarigaasi oo saarnaa walxaha qarxa ay ciidankaasi ku daba-joogeen, balse ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay.
Gaarigaasi ayaa sida la sheegay lala damacsanaa in qaraxyo looga geysto magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarumaha ay degan yihiin dowladda Soomaaliya iyo goobaha ay bulshadu ku badan tahay.
Ciidanka NISA ayaa dhowr jeer oo hore fashiliyay qaraxyo noocaan oo kale ah islamarkaana lala damacsanaa in qaraxyo looga geysto magaalada Muqdisho, iyadoona inta badan qaraxyadaas ay waxyeelo kasoo gaarto dadka shacabka ah iyo sidoo kale shaqsiyaadka la shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya.
Wixii warkaan kusoo kordha kala soco wararkeena berri Insha Allaah